बाहिरी ठाउँहरू सजाउन Sklum को प्रस्तावहरू पत्ता लगाउनुहोस् | बेजिया
बाहिरी ठाउँहरू सजाउन Sklum को प्रस्तावहरू पत्ता लगाउनुहोस्
मारिया vazquez | 08/04/2022 18:00 | फर्नीचर
सायद गर्मीको बारेमा सोच्नु धेरै आशावादी छ, तर बाहिरी ठाउँहरूको आनन्द लिनको लागि पर्याप्त रमाइलो तापक्रमको बारेमा सोच्नु हुँदैन। के तपाईंले यी बारे सोच्न थाल्नुभयो? यदि तपाइँ अझै पनि थाहा छैन कि कसरी तिनीहरूको फाइदा लिने, Sklum को प्रस्तावहरू पत्ता लगाउनुहोस् बाहिरी ठाउँहरू सजाउन, तिनीहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ!
Sklum यसको क्याटलगमा विभिन्न प्रस्तावहरू सङ्कलन गर्दछ टेरेसहरू, आँगनहरू र बगैंचाहरू सजाउनुहोस्। चिल आउट क्षेत्र सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको जस्तै केही आराम; अन्य धेरै परम्परागत र सोफा र बगैचा टेबल को सेट संग सम्पूर्ण परिवार को समायोजित गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ, तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनुहोस्!
तपाईं बाहिरी क्षेत्रमा के उपयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईं यसलाई कस्तो शैली बनाउन चाहनुहुन्छ? प्रतिकूल मौसममा यो कत्तिको जोखिममा छ? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफले तपाईंलाई खोज्न मद्दत गर्नेछ सबैभन्दा उपयुक्त फर्नीचर कतिवटा Sklum प्रस्तावित बाहिरी ठाउँहरू सजाउन। केही हेरौं:
1 सरल, प्राकृतिक शैली संग
2 सम्पूर्ण परिवारको लागि सहज
3 चिन्ता नलिनुस्
4 धेरै सानो ठाउँहरूको लागि
सरल, प्राकृतिक शैली संग
के तपाइँ तपाइँको बाहिरी ठाउँहरूमा प्राकृतिक शैली ल्याउने प्रस्तावहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? फर्निचर र सामानहरू बनाइयो काठ, बाँस र तरकारी फाइबर माथिको छविमा देखाइएको यस प्रकारको ठाउँ सजाउन रतन वा जुट जस्ता उत्कृष्ट सहयोगीहरू हुन्।
कुर्सी र कुर्सीहरू मिलाउनुहोस् ecru टोन मा कपडा जसले आराम प्रदान गर्दछ र सौर्य उर्जाको साथ बत्तीहरू र बत्तीहरूको तारको साथ रातमा ठाउँलाई न्यानो वातावरण दिन नबिर्सनुहोस्। के तपाईलाई यी प्रस्तावहरू हामी जस्तै मनपर्छ?
सम्पूर्ण परिवारको लागि सहज
यदि तपाइँको प्राथमिकता सम्पूर्ण परिवारले सहज महसुस गर्छ भने, आदर्श यो हो कि तपाइँ परम्परागत बगैंचा सेट मा शर्त लगाउनुहुन्छ। द संरचित सोफा र कुर्सीहरू तिनीहरूको साथमा नरम कुशनहरूसँग संयोजनमा, तिनीहरूले तपाईंलाई अधिकतम आराम प्रदान गर्नेछन्, तपाईंको बैठक कोठालाई वसन्तदेखि शरद ऋतुसम्म बाहिर सार्दै।
के तपाईंसँग एउटा टेबल समावेश गर्न ठूलो ठाउँ छ जहाँ परिवार खान बस्न सक्छ? नहिचकिचाउनुहोस्, तपाईले यसबाट उत्कृष्ट खेल पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ स्ट्याकयोग्य वा फोल्डिङ टेबल र कुर्सीहरू पनि छनौट गर्नुहुन्छ भने धातु र polypropylene र तपाईले यसको मर्मतको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यो तिनीहरूलाई कभर गर्न र जाडोको समयमा तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न पर्याप्त हुनेछ।
हामीले परिचयमा पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, बाहिरी ठाउँहरू सजाउनको लागि स्क्लमको प्रस्तावहरूमध्ये तपाईंले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू पनि पाउनुहुनेछ। एक चिल आउट क्षेत्र सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं सूर्यास्तमा कामबाट घर फर्कँदा आराम गर्न आवश्यक सबै कुरा भएको क्षेत्र।
को भुइँ तकियाहरू जुन कुरा हामीले केही साताअघिको कुरा गरिरहेका थियौं सम्पूर्ण प्रवृत्ति र यी ठाउँहरू सजाउन सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प। तिनीहरू सबैका लागि सहज छैनन् किनभने तिनीहरू धेरै कम छन्, तर यदि यो तपाईंको लागि समस्या होइन भने, अगाडि बढ्नुहोस्! तपाईंले तिनीहरूलाई छविमा जस्तै काठको संरचनामा प्रस्तुत गरेर तिनीहरूलाई जहिले पनि कार्यक्षमताको थप उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ।
सेटमा केही थप्नुहोस् बाहिरी रगहरू, केही सब्जी फाइबर पाउफहरू जसले कम टेबल र केही सौर्य-संचालित भुइँ लालटेनको रूपमा सेवा गर्दछ र तपाईंले गर्मीमा दिन र रातहरूको आनन्द लिनको लागि आराम र घनिष्ठ ठाउँ प्राप्त गर्नुहुनेछ।
धेरै सानो ठाउँहरूको लागि
बेजियामा हामीले केहि महिना अघि तपाईसँग कुरा गरिरहेका थियौं फोल्डिंग फर्नीचर को लाभ धेरै सानो बाहिरी ठाउँहरू सजाउन। र Sklum पनि सजावट गर्न को लागी यस प्रकार को फर्नीचर मा शर्त छ बालकनी वा साँघुरो ठाउँहरू। उसले यसलाई राम्रो रंगको छायाको साथ गर्छ, अर्थात्, तिनीहरूलाई अलग बनाउनको लागि।
टेबल र फोल्डिंग बेन्चहरू स्टीलले बनेको र तोरी वा हरियो जस्ता रंगहरूमा तिनीहरू धेरै सानो बाहिरी ठाउँहरू सजाउनको लागि Sklum को उत्कृष्ट शर्त बन्छन्। सानो तर कार्यात्मक र विभिन्न परिस्थितिहरूमा अनुकूलन गर्न सक्षम। जाडोको समयमा, सङ्कलनले तपाईंलाई कुनै पनि हालतमा कब्जा गर्दैन!
के तपाईंलाई बाहिरी ठाउँहरू सजाउन Sklum को प्रस्तावहरू मनपर्छ? हामीलाई तिनीहरूको क्याटलग मन पर्छ र यसले हामीलाई धेरै अचम्म मान्दैन कि तिनीहरूको लोकप्रियता बढेको छ। तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो सूचीमा ल्याउन व्यवस्थित गरेका छन् र तपाईंसँग सबै कुरा लिन चाहन्छन्। साथै मूल्यहरूको सन्दर्भमा, तिनीहरू एकदम प्रतिस्पर्धी छन् किनभने तिनीहरू उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्छन् जुन सबै जेबहरूमा अनुकूल हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » बाहिरी ठाउँहरू सजाउन Sklum को प्रस्तावहरू पत्ता लगाउनुहोस्
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू जुन बच्चाले जन्ममा अनुभव गर्छ
भूमध्य आहारको विशेषताहरू र फाइदाहरू